Ukwenza Iividiyo ZeBhayibhile Ngeelwimi Ezininzi
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiBasque IsiBatak (SaseToba) IsiBhulu IsiBislama IsiChichewa IsiChol IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGalician IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiHausa IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaya IsiMingrelian IsiMyanmar IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiOtomi (SaseMezquital Valley) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPhuthukezi(sasePortugal) IsiPolish IsiPonapea IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTajiki IsiTankarana IsiTarascan IsiTelugu IsiTigrinya IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiUzbek IsiValencian IsiWelsh IsiXhosa IsiZulu isiZapotec (saseIsthmus)
Iividiyo Ngeelwimi Ezingamakhulu
AmaNgqina KaYehova aziwa ngomsebenzi wawo wokuguqulela. NgoNovemba 2014, besisele siguqulele iiBhayibhile ngeelwimi eziyi-125 kunye noncwadi olusekelwe eBhayibhileni ngeelwimi eziyi-742. Umsebenzi wethu wokuguqulela ukwaquka neevidiyo. Ukususela ngoJanuwari 2015, ividiyo ethi Yintoni Eyenzekayo EHolweni YoBukumkani? ibifumaneka ngeelwimi eziyi-398, ibe ividiyo ethi Kutheni Ufanele Ufunde IBhayibhile? ngeelwimi eziyi-569. Bekutheni ukuze kwenziwe ezi vidiyo, ibe ziye zenziwa njani?
NgoMatshi 2014, iQumrhu Elilawulayo lamaNgqina KaYehova laye layalela iiofisi zamasebe ezisehlabathini lonke, ukuba zilungiselele ukurekhoda iividiyo ngeelwimi ezininzi kangangoko kunokwenzeka ukuze kukhuthazwe abantu bafunde iBhayibhile.
Ukuguqulela ividiyo kufuna izinto eziliqela. Okokuqala, ividiyo iyaguqulelwa. Emva koko, kukhethwa abantu abaza kurekhoda. Okulandelayo, iyarekhodwa ize ilungiswe. Okokugqibela, amazwi arekhodiweyo, amagama nevidiyo iyadityaniswa ukuze kuphume ividiyo epheleleyo enokufakwa kwiwebhsayithi.
Amanye amasebe ebeneendawo zokurekhoda nabantu abaqeqeshelwe ukwenza lo msebenzi. Kodwa, kuthekani ngeelwimi ezithethwa neziguqulelwa kwiindawo ezisemagqagaleni?
Kumazwe amaninzi bekuthunyelwa abantu abaqeqeshelwe ukurekhoda, besebenzisa izixhobo zokurekhoda ekulula ukuhamba nazo. Kusetyenziswa ezi zixhobo, bekuye kwenziwe indawo yokurekhoda yokwexeshana kwiofisi, kwiHolo YoBukumkani okanye ekhayeni lomntu. Abantu abathetha olo lwimi kuguqulelwa kulo, bebencedisa ekufundeni, ekuqeqesheni abantu abafundayo nasekuhloleni. Emva kokuba kurekhodwe kwagqitywa, umntu oqeqeshelwe ukurekhoda ebefudukela kwindawo elandelayo.
Ngale ndlela, kuye kwenziwa iividiyo ngeelwimi ezininzi kakhulu kunangaphambili.
Ezi vidiyo ziye zathandwa kakhulu. Abantu abaninzi, bebeqala ukuva iividiyo ngolwimi lwabo ngezi zethu.
Olunye ulwimi oluye lwaguqulelwa sisiPitjantjatjara, esithethwa ngabantu abangaphezu kwe-2 500 eOstreliya. Lurekhodelwe kwidolophu yaseAlice Springs, eNorthern Territory. UCallan Thomas, obencedisa xa bekurekhodwa, uthe: “Ezi vidiyo ziye zathandwa nyhani. Abantu bebenomdla ibe bebuza ukuba zifumaneka phi ezininzi. Zinqabile iincwadi ngolu lwimi. Xa beziva—de bazibone nokuzibona—bathi manga.”
Amanye amaNgqina amabini eCameroon ayezihambela ngephenyane. Afika ema kwingqingqi yasePygmy aza ancokola nenkosi, eyayikwayititshala. Emva kokuba befumanise ukuba le nkosi ithetha isiBassa, aba bazalwana bayidlalela ividiyo ethi Kutheni Ufanele Ufunde IBhayibhile? ngolwimi lwayo. Le nkosi yachukumiseka yaza yacela iincwadi.
Kweny’ ilali yaseIndonesia, umfundisi walapho akawafuni amaNgqina KaYehova, ibe uye watshisa zonke iincwadi ebezihanjiswe kuloo mmandla. Abany’ abahlali baye bagrogrisa ngokutshisa iHolo YoBukumkani. Emva koko, amapolisa amane aye kumzi weliny’ iNgqina aza, likunye nentsapho yalo, aliphek’ elophula ngemibuzo. Afune ukwazi ukuba kwenzeka ntoni kwiHolo YoBukumkani, laza lababonisa ividiyo ethi Yintoni Eyenzekayo EHolweni YoBukumkani? ngesi-Indonesia.
Emva kokuba liyibukele le vidiyo, elinye ipolisa liye lathi: “Tyhini, abantu abanazi kakuhle.” Elinye liye labuza: “Ningandinika le vidiyo ukuze ndiyibukelise abanye? Iineenkcukacha ezichanileyo ngani.” Ngoku, amapolisa akanangxaki namaNgqina ibe ayawakhusela.
Ukuba ubungekazibukeli ezi vidiyo ngolwimi lwakho, ubanjwe yintoni?